Binance Smart Chain ဆိုတာဘာလဲ။ ၎င်းသည် Metamask - Cazoo နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်သနည်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » Binance Smart Chain ဆိုတာဘာလဲ။ ၎င်းသည် Metamask နှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်သနည်း
tag ကို: Binance, Binance တံတား, Binance စမတ်ချည်နှောင်, အချစ်ရယ်, Metamask
စာဖတ်ချိန် -6minuti
Binance သည် Binance တစ်ခုတည်းသာမက Binance Smart Chain လည်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် DeFi protocol များအတွက်အဘယ်ကြောင့်အလွန်ရေပန်းစားလာသနည်း။ အဓိကအားဖြင့် Ethereum နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဓာတ်ငွေ့ခများကြောင့်ကော်မရှင်များသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ ထို့အပြင်အမြန်ဆုံးငွေပေးငွေယူမြန်နှုန်းဖြင့်လည်း။ ၎င်းတို့သည်ကုန်သည်များအားလုံးကိုဆွဲဆောင်ရန်အခြေခံကျသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည် (သို့) မင်းသားကိန်းဂဏန်းများမရှိသောစိတ် ၀ င်စားသူများကိုပင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏စုဆောင်းငွေကိုအလွန်ဂရုစိုက်သည်။ သင်သည်ဤအကွာအဝေးတွင်သင့်ကိုယ်သင်မြင်ပါကသင်ပိုမိုသိလိုသည်။
Binance ကိုစာရင်းမသွင်းဘဲနေပါသလား။ အတူလုပ်ပါ ဒီရည်ညွှန်း link ကို ကော်မရှင်များကို ၂၀% စုဆောင်းရန်ခင်ဗျားမှာအားသာချက်ရှိတယ်၊ ငါကအားသာချက်ရှိတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မသုံးပါနဲ့။ ဒါဟာပြaနာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အချိန်ကျွန်ုပ်သည်ဘဏ္advာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြောသမျှအားလုံးသည်အွန်လိုင်း cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အကြံဥာဏ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါသည်ဤပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြု။ မဟုတ်ရင်ငါ့ ဦး ခေါင်း၌ရှုပ်ထွေးရလိမ့်မည်ဟုသဘောတရားများကိုအလွတ်ကျက်။ ငါမှတ်စုစာအုပ်ပေါ်မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကအမြဲထင်ခဲ့တယ် ခွဲဝေမှုသည်ဂရုစိုက်သည်။ ငါပေးချင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြံဥာဏ်ကတော့ - သင်၏အသက်တာကိုအနည်းဆုံးထိခိုက်မှုမရှိဘဲဆုံးရှုံးနိုင်သည့်ငွေပမာဏကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် crypto ကိုသင်ရောင်းလိုလျှင်အမြဲတမ်းသတိထားပါ။
BSC (Binance Smart Chain) သည်အထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်ကျစေသည့် DeFI ပလက်ဖောင်းများစွာကိုလက်ခံထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသော (သို့) အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အထိရှိသည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုငွေသွင်းရန်သင်သွားသည့်နေရာကိုအမြဲတမ်းသတိထားပါ၊ ရိုက်စား (rip-off) လည်း Binance Smart Chain တွင်ရှိသည်။
Binance Smart Chain ဆိုတာဘာလဲ
Metamask နှင့် BSC ချိတ်ဆက်ရန်
DeFi application များသည် Binance Smart Chain တွင်အဘယ်မှာရှိသနည်း။
တကယ်တော့ BSC သည် Ethereum အတွက်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ထပ်တူပြုခြင်းဖြင့်သွားသော blockchains များဖြစ်သည်။ ETH ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော application အားလုံးသည် BSC နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ETH တွင်မြင့်မားသောအခကြေးငွေများ (ကော်မရှင်များ) ရှိပါက၎င်းသည်ကွန်ယက်သိပ်သည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပြုလုပ်သောအတည်ပြုချက်များစွာရှိသည် (ETH သည်အတိအကျ blockchain ဖြစ်သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချ) နှင့်ဤ node များထဲမှတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုသူသည်အခြားသူများထက်များစွာပေးဆပ်လိုစိတ်ရှိရမည်။ အဆိုပါ BSC ဖြစ်ပါတယ် ဗဟိုnode အနည်းငယ်ရှိသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ BSC သည် Binance ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသော်လည်း၎င်းသည်လဲလှယ်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Binance Chain နှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။ Binance စမတ် Chain သည် Smart Contracts ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် dApps (ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော applications များ) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခွင့်ပြုသည်။
ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်မှဖြစ်စေ Binance ရှိပိုက်ဆံအိတ်မှတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ BSC သို့လွှဲပြောင်းငွေများကိုပထမဆုံးအာရုံစိုက်ရန်မှာပထမဆုံးဖြစ်သည်။ Binance Chain တွင် BEP2 စံ (Binance Chain Evolution အဆိုပြုချက် ၂) ရှိပြီး Binance Smart Chain တွင် BEP2 စံရှိသည်။ သတိပြုပါ၊
ယခု BSC နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရန် Metamask ကိုပြင်ဆင်ရမည်နှင့်ရန်ပုံငွေများကိုလုံခြုံစွာမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
Metamask သည် DeFi ကမ္ဘာနှင့်အဆင်ပြေဆုံးပေါင်းကူးတစ်ခုဖြစ်သည် (ဤတွင်ကျွန်ုပ်ပြောနေသည်) - ၎င်းသည်သင်ဤအပလီကေးရှင်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် browser extension တစ်ခု (chrome နှင့်လိုက်ဖက်သော browser ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်) ဖြစ်သည်။ download မှာမျက်လုံး, run သောအတုရှိပါတယ်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီးတရားဝင်ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ.
တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်သင်က Wallet အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်အခြားနေရာရှိသင့်တွင်ရှိသည့်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုကိုတင်သွင်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုကိုလည်းတင်သွင်းနိုင်သည်။ (သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌သိမ်းဆည်းရန်ရူပဗေဒပိုက်ဆံအိတ် - လုံခြုံရေးဘယ်တော့မျှမဖြစ်နိုင်ပါ။ သတိရပါ - မင်းရဲ့သော့တွေမဟုတ်၊ဤခေါင်းစဉ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
Metamask ကို Ethereum network နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖန်တီးခဲ့သောကြောင့် extension ကိုသက်ဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသော network ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းကို fox အနီးရှိထိပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် drop-down menu တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းကိုငါနှိပ်လျှင်အောက်ခြေတွင်ကျွန်ုပ်အသံရှိသည် စိတ်တိုင်းကျ RPC။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို Metamask ကို BSC နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုမည့် parameters များကိုရိုက်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အဘယ် parameters များကိုရိုက်ထည့်? Binance ကသူတို့ကို Binance Academy တွင်တိုက်ရိုက်ပြောခဲ့သည် (ဒီမှာသူတို့နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန် link ကို), ငါကဒီမှာသူတို့ကိုကပ်ပါလိမ့်မယ်:
RPC လိပ်စာအသစ် - https://bsc-dataseed.binance.org/
Explorer Explorer URL ကိုပိတ်ပါ https://bscscan.com
ဘာကြောင့် Ethereum နဲ့ဟန်ချက်ညီမှုရှိသလဲ။ BSC နဲ့ဘာကြောင့်အချည်းနှီးဖြစ်နေရတာလဲ။ အကြောင်းမှာအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်မတူညီသော blockchains နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် BSC နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Metamask ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ငွေထည့်ရန် DeFi နှင့်၎င်း၏ application များတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
ဒါဆိုရင် BSC ပေါ်မှာငါတို့ပိုက်ဆံအိတ်အသစ်မှာရန်ပုံငွေဘယ်လိုသွင်းမလဲ။ ၎င်းသည် Binance မှတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်သည်။ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုညာဘက်အပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာထည့်ပြီး Withdraw ခလုတ်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ Withdrawal ကဏ္sectionတွင် Cryptocurrency ကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းလိုသော crypto ကိုရွေးချယ်ပြီးညာဘက်တွင် Binance Smart Chain ပေါ်ရှိဒင်္ဂါးများဖြင့်၎င်းတို့ကိုလွှဲပြောင်းလိုသည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒီရွေးစရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၊ စနစ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ကိုပံ့ပိုးသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းသို့သင်ရွေ့လျားနေသလား? သငျသညျသူတို့ကိုဆုံးရှုံး Watch! သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် Metamask ကိုထူထောင်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
အလွန်အလေးအနက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Binance သည်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသေချာစေရန်သေးငယ်တဲ့ဉာဏ်စမ်းပဟေtakesိတစ်ခုပင်ပြုလုပ်သည်။ ဒီမှာအဖြေမပေးချင်ဘူး၊ အဲဒါကိုမလုပ်ခင်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ငါ့လမ်းညွှန်ကိုသေချာဖတ်ပါ
Accountet အောက်ရှိ Metamask မှကျွန်ုပ်တို့ရယူလိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းလိုသော crypto ပမာဏကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Authenticator နှင့်ငွေပေးငွေယူကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအထောက်အထားကိုပြသဖို့ကျွန်တော်ဟာ ၀.၁ BNB၊ ယူရို ၂၀ လောက်ပြောင်းခဲ့တယ်။
ငါ BHB ၀.၁ BSC သို့ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သောလိပ်စာအတိုင်းရွှေ့ပြောင်းလိုက်ကြောင်း blockchain node တွင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့သည်။ ငွေပေးငွေယူလိပ်စာကိုကူးယူပြီးသင်ဤအဆင့်များကိုစစ်ဆေးလိုပါက BscScan.com တွင်စစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ blockchain သဘာဝအားဖြင့်အများပြည်သူနှင့်လူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီမှာ Metamask ကိုပြန်သွားရင် BNB ကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ တခါတရံမှာမိနစ်အနည်းငယ်၊ တစ်ခြားအချိန်နာရီအနည်းငယ်ကြာတတ်တယ်။ ကွဲပြားခြားနားမှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်လာတယ်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းရှိသေးသည် Binance တံတား, သငျသညျ crypto လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုက်ဆံအိတ်မှ တိုက်ရိုက် BSC အပေါ်။
နောက်ဆုံးတွင် BSC နှင့်၎င်း၏ DeFi application များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
defistation.io: Defistation သည်အခြေခံအားဖြင့် DeFi စီမံကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် Binance Smart Chain တွင်တည်ဆောက်ပြီးလည်ပတ်ထားသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္projectsာရေးစီမံကိန်းများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းကို Cosmostation မှတီထွင်။ ထိန်းသိမ်းထားပြီး Binance မှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ Binance Smart Chain ရှိ DeFi စီမံကိန်းများတွင်စုစုပေါင်းသော့ထားသောတန်ဖိုးကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် အချိန်မှန်၌။ Defistation တွင်ဖော်ပြထားသောမက်ထရစ်များနှင့်ဇယားများကသင့်အားဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္financeာရေး၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်တိုးပွားလာသောလှုပ်ရှားမှုများကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။
Defistation တွင်ဖော်ပြထားသော DeFi စီမံကိန်းအားလုံးသည်ကန ဦး စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းနောက်ကျွန်ုပ်တို့အားပြသထားသောအချက်အလက်များ၏မှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုရန်တိကျခိုင်လုံသောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်သည်။ ၄ င်းတို့၏ဘေးတွင်“ Verified” တံဆိပ်ပါသောစီမံကိန်းများသည် TVL တွက်ချက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များ၏စာရင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်တိကျကြောင်းအတည်ပြုသောစီမံကိန်းများဖြစ်သည်။
Defistation သည် Binance Smart Chain တွင်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးဟန်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်စီမံကိန်းတစ်ခုစီ၏စာချုပ်များ၏စာချုပ်များနှင့် ABIs (module များ၏ကြားခံဆက်သွယ်မှု) စာရင်းကိုစုဆောင်းသည်။ စမတ်စာချုပ်တစ်ခုစီ၏စုစုပေါင်းလက်ကျန်ကိုတစ်နာရီလျှင် BNB နှင့် BSC တိုကင်စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။ စုစုပေါင်းသော့ခတ်ထားသောတန်ဖိုးကိုဒီပမာဏကိုယူပြီးတိုကင်တစ်ခုချင်းစီ၏ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) တန်ဖိုးဖြင့်မြှောက်ခြင်းဖြင့်ပြသသည်။
defistation.io ထဲသို့ဝင်သည်နှင့် DeFi ပရောဂျက်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုစီမံကိန်းကိုယ်နှိုက်တွင်အသုံးပြုသောငွေပမာဏကိုသော့ခတ်ထားခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
ဤအချက်သည်သင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားစေမည့် DeFi စီမံကိန်းကိုရွေးချယ်ရန်၊ သင်စိတ်ဝင်စားသည့်စီမံကိန်းကိုနှိပ်ပါ (ကြော်ငြာဟူသောစကားလုံးပါသောပထမဆုံးကြော်ငြာသည်ကြော်ငြာ - ကြော်ငြာ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစတင်လေ့လာပါ။
ခလုတ်ကိုနှင့်အတူ Dapp ကိုဖွင့်ပါ သငျသညျစီမံကိန်းသို့ catapulted လိမ့်မည်။
ဤ dApps အချို့ကိုဆန်းစစ်လေ့လာသင့်သည်။
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(55848)
€ 29,90 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(826)
€ 189,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(229)
€ 270,00 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(798)
€ 429,00 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4663)
€ 4,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(88952)
€ 12,98 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 13,79 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(50670)
€ 11,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(67874)
€ 35,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(13198)
€ 34,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3976)
€ 204,98 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(17736)
€ 8,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(99256)
€ 14,00 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(960)
€ 163,00 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(201472)
€ 18,90 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(133206)
€ 14,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(28905)
€ 16,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3171)
€ 189,90 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(45271)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4581)
€ 95,00 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4184)
€ 49,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(115592)
€ 14,90 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(54429)
€ 29,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5695)
€ 49,87 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(21)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(208)
€ 216,50 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(6228)
€ 25,49 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(34382)
€ 130,98 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(4129)
€ 6,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1845)
€ 349,38 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(18228)
€ 19,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Lamicall Bicycle Phone Holder၊ Metallic Motorcycle Holder - iPhone 12 Mini၊ 12 Pro၊ 11 Pro၊ Xs Max၊ X၊ 8၊ 7၊ 6၊ Samsung S10 S9 S8၊ 4.7-6.8 လက်မ စမတ်ဖုန်းများအတွက် လက်ကိုင်ဖုန်း
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5057)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(56670)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11894)
€ 21,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
VARTA CR 2032၊ 6032101415၊ Lithium Button Cell၊ Flat၊ အထူးပြု၊3ဗို့၊ အချင်း 20mm၊ အမြင့် 3,2mm၊ ဘက်ထရီ5ခု
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(31637)
€ 2,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(61491)
€ 5,79 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1332)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(44621)
€ 39,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11104)
€ 27,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
DVB-T2 H.265 ဒစ်ဂျစ်တယ် ကုန်းနေကုဒ်ဒီကုဒ် HEVC ပင်မ 10 ဘစ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကုန်းမြေလက်ခံသူ HD TV သည် အခမဲ့ချန်နယ်အားလုံးကို လက်ခံသည်၊ SCART HDMI Multimedia PVR USB WiFi [2in1 Universal Remote Control]
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(769)
€ 21,66 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(9499)
€ 59,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(9497)
€ 15,00 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(141525)
€ 24,99 (30/06/2022 19:59 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1587)
€ 49,90 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(17961)
€ 159,90 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5860)
€ 16,35 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(513)
€ 47,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(107)
€ 18,90 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(11529)
€ 9,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1226)
€ 11,40 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး NEEM ဆီ၊ 240 ml ပုလင်း
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1256)
€ 13,30 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2602)
€ 34,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5253)
€ 376,75 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3101)
€ 11,83 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1334)
€ 15,00 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1960)
€ 3,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(91)
€ 12,90 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
CONOPU OZW21P02B၊ 3-in-1 လျှပ်စစ် ခြင်ရာကတ်
(01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1242)
€ 13,50 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(182)
€ 5,41 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2080)
€ 9,00 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(498)
€ 8,50 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(20576)
€ 109,00 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
လျှပ်စစ် Mosquito Paddle၊ Mosiller2in 1 Electric Fly Swatter နှင့် USB အားသွင်းအခြေခံပါရှိသော 3000V Fly Swatter၊ အိမ်၊ အိမ်၊ မီးဖိုချောင်၊ အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်ဘက်အတွက် အိတ်ဆောင်အင်းဆက်ပိုးမွှားပျံ နှင့် UV မီးအိမ်
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(67)
€ 33,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(3226)
€ 25,49 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(993)
€ 8,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(754)
€ 25,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1259)
€ 4,90 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Compo Duaxo အဆင်သင့်သုံးရန်၊ ဘက်စုံသုံး မှိုသတ်ဆေး၊ အိမ်နှင့် ဥယျာဉ်အတွက် အလှဆင်အပင်များ၊ 750 မီလီလီတာနှင့် နှင်းဆီမြေသြဇာ၊ ပြင်းထန်သောပန်းပွင့်များနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေကြီးထွားမှုအတွက် 1 L
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(848)
€ 8,59 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1523)
€ 2,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
Einhell Garden Pump GC-GP 6538 (650 W၊ ဖိအား 3,6 bar၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း 3.800 l/h၊ ရေဖြည့်ဝက်အူ၊ ရေမြောင်းဝက်အူ၊ လက်ကိုင်လက်ကိုင်)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(5640)
€ 58,89 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1271)
€ 3,80 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(644)
€ 24,16 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(262)
€ 13,00 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1076)
€ 13,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(368)
€ 19,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2562)
€ 14,36 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ချိန်ညှိနိုင်သော စင် ၃ ခုပါရှိသော Keter Jolly အမြင့် Cabinet အဖြူ၊3x 68 x39 cm
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(271)
€ 50,00 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(59)
€ 6,39 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(197)
€ 29,90 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1253)
€ 5,84 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1913)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(1412)
€ 6,89 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(2341)
€ 90,00 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(46)
€ 22,09 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(127)
€ 6,38 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
ကြယ် ၅ ပွင့် အနက် ၄.၃(85)
€ 9,61 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
€ 20,99 (01/07/2022 18:42 GMT +00:00 - အခြားသတင်းအချက်အလက်များကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် [သက်ဆိုင်သောအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအမေဇုံဆိုက်ကို (s),] ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်ဒီထုတ်ကုန်များ၏ဝယ်ယူလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။)
လာမယ့်ဆောင်းပါးMargin Trading (LEVA နှင့်အတူ) သည် Binance တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။